Vanhu vakawanda kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana, kusanganisira mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vaungana muBulawayo vachirangarira mabasa akaitwa naVaDabengwa vachiri vapenyu.
Hama neshamwari dzaVaDabengwa, kusanganisirawo vakuru vezvematongerwo enyika kubva kuSouth Africa, vanosanganisira VaJacob Zuma, vataura pagungano iri vachirumbidza mufi serimwe ramagamba makuru akarwira kuti nyika iwane kuzvitonga.
Vanhu ava vatsanangura VaDabengwa vemunhu akaramba akazvipira mukurwira muhutongi hwejekerere kusvika mukufa.
Asi mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, havana kuenda kugungano iri.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba, kuti seyi vanga vasipo sezvo vanga vasingabatike parunhare rwavo.
Munin’ina waVaDabengwa, VaSijabuliso Dabengwa, vati mukoma wavo aive munhu aisadududza pane zvinhu zvaavnenge azvipira kuita zvisinei nekuti izvi zvaigona kuzomupinza munjodzi.
Imwe yeshamwari dzaVaDabengwa, Muzvinafundo Regis Austin vatsinhira zvimwe chetezvo vakatiwo VaDabengwa vaive munhu aisatya kutaura paanenge awona kuti pakanganiswa chero nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika.
Vati vanoyeuka kuti VaDabengwa ndiye mumwe wevanhu vekutanga kupokana nedanho rekuda kuunza hutongi hwebato rimwe chete munyika kana kuti one-party state.
Mumwe wevaive varwiri vehondo yerusununguko pasi pemauto eZipra, VaJeremy Brickhill, vati VaDabengwa vakapira hupenyu hwavo kurwira rusununguko nehutongi hwejekerere vachiri vadiki.
Vati mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino anoratidza kuti hamusati mave nerusunguko ruzere vakakurudzira vechidiki kuti vatore muenzaniso waVaDabengwa vaenderere mberi nehondo iyi.
Vachitaurawo pagungano iri, mumwe murwiri wehondo yerusununguko, VaBaster Magwizi, vati kudomwa kwakaita hurumende VaDabengwa segamba renyika, kungozadzisa chirevo sezvo zviri pachena kune veruzhinji kuti VaDabengwa nderimwe remagamba makuru enyika.
VaMagwizi vati VaDabebgwa vanga vari mushishi yekuedza kuti midziyo kusanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro enhoroondo yehondo zvebato reZapu zvakatorwa nehurumende yaVaRobert Mugabe zvidzorwe kubato iri.
Vatiwo VaDabengwa vange vaine shungu yekuti nyaya yeGukurahundi igadziriswe nemazvo vakati VaDabengwa vangazorora murugare kana hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa ikagadzirisa zvose izvi nekukasika.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZapu, VaIsaac Mabuka, vashora zvakaitwa nevamwe vamiriri veparamende vebato reZanu PF vakaramba kupa ruremekedzo kuna VaDabengwa vachiti vakawanda vevavnhu ava vanofanirwa kutenda vanhu vakaita saVaDabengwa nebasa guru ravakaita kurwira rusununguko.
Vaimbove nhengo yepolitburo yebato reZanu PF, avo vakadzingwa mubato iri, VaRugare Gumbo, vati nhoroondo yehondo yerusununguko haingave yakakwana kana kusina kutaurwa nebasa guru rakaitwa naVaDabengwa.
VaGumbo vati zvinorwadza kuti VaDabengwa vakafira kunze kwenyika nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvemunyika.
VaDabengwa, avo vaizivikanwa nerekuti The Black Russian, vakashaya nemusi weChipiri svondo rapera muNairobi guta guru reKenya vachibva kuIndia uko kwavairapwa.
VaDabengwa vari kuvigwa neMugovera kumusha kwavo kuNtabazinduna kunze kweBulawayo muri mudunhu reMatabeleland North.